Allgedo.com » Ciidamada dowlada oo qof rayid ah ku dilay xaduuda Kenya
Home » News » Ciidamada dowlada oo qof rayid ah ku dilay xaduuda Kenya Print here| By: allgedo.com:
1 Jawaab Ciidamada dowlada Soomaaliya ee kusugan xaduuda udhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku toogtay qof rayid ah oo kamid ahaa dadka deegaanka gudaha kenya.
Rag katirsan ciidamada dowlada ayaa ku amray ninkan inuu istaago hase ahaatee waxaa la sheegay inuu ka biyo diiday kadibna ay toogteen.
Markaas ayay ciidamada dowlada ka tageen goobta, waxaana gaaray ciidamo katirsan dowlada Kenya oo meydka meesha ka qaaday, kadibna sheegay in ay baarayaan sababta dilka loogu gaystay qofkan rayidka ah.
Waxaa ay noqonaysaa markii ugu horeysay oo ay ciidamada dowlada dad rayid ah ku toogtaan xaduuda Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan dhanka degmada Dhoobley.
Ciidamada dowlada oo qof rayid ah ku dilay xaduuda Kenya " farxiyo says:	October 30, 2012 at 3:25 pm	alaha unaxariito marxuumkan.dawlada sheydaan shicibka haleynina carada ale idiin soo dagdagtaye maxaad hada qofkaan kudisheen [UMADA U NAXARIISTA NAXARIISTA ALAHA IDINKA FIGEEYE;